प्रधानमन्त्रीको ‘टुक्के मन्त्रालय’ « Postpati – News For All
प्रधानमन्त्रीको ‘टुक्के मन्त्रालय’
पृथीछक बुढा मगर । ठट्यौली उखान टुक्का र हाँसी मजाक गर्दा मानिसहरुको दिलमा उमंग आउछ र दिमाग फ्रेस बन्छ । तर कसैले जव सिङ्गो देशमाथि हाँसी मजाक गर्छ भने, सम्झनु देश बिगार्छ र जनतालाई बिचल्ली पार्छन ।
देशका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली इतिहासकै ठट्यौली प्रधानमन्त्रीमा पर्नु हुन्छ । उहाँको ठट्टा सुन्दा भित्रै देखि मज्जा लागेर आउँछ । कहिलेकाही त मज्जाकै लागि पनि उहाँका भाषणहरु सुन्ने गरेको छु ।
बिडम्वना, उहाँको ठट्टा देशका लागि बारम्बार दोहोरिदा जनताले नै दु:ख भोग्न थालेका छन ।
जनताले कुटिल उखान टुक्काहरू बुझ्न जान्दैनन् । किनकी जनता इमान्दारीताको प्रतिक हो । ठट्टालाई ठट्टैमा उडाइदिनु पर्थ्यो तर सुखी र समृद्ध नेपाली सपना घुसाइएका कुटिल ठट्टाहरु जनताले बुझ्दैन । बरु तिनै कुटिल ठट्टाहरुमा जनता लालायित भए ।
हावावाट बिजुली, पानी जहाज, घरघरमा पाइपद्वारा ग्यास बितरण, नेपालले आफ्नै खनिज तेल निकाल्ने, पुर्व पश्चिम रेल कुदाउने यो प्रधानमन्त्रीका दुई बर्ष भित्रका योजनाहरु थिए । चुनावताका प्रधानमन्त्रीले के ठट्टा गरेका थिए, जनताले बिश्वास गरिहाले । ठट्टा बुझ्न नसक्ने हामी जनता पनि अलि बढी नै सोझो भयौ ।
प्रधानमन्त्रीलाई मजाक गर्ने अधिकार छ ! मान्छे हुन् कहिलेकाही हासी मजाक गर्नु स्वभाविकै हो ।
प्रधानमन्त्रीले गत असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेशनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पुस १६ गतेदेखि पानी जहाज कलकत्ता पुग्ने बताउँदै उनले जहाजको यात्रा गर्न निम्तोसमेत दिएका थिए ।
‘यो २०१८ हो, २०१९ को सुरुमै जहाज चल्छ । पुस १६ गते स्टिमर चढेर कलकत्ता गइन्छ । सबैलाई निम्तो छ।’
पोखराको एउटा सभामा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई खानकै लागि काम गर्न आबस्यक नरहेको कुरा बताए । सरकारले खाना बिस्तारामै उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर मजाक गरे । बिरोधीले मानसिक सन्तुलन गुमेको अभिव्यक्ति पनि दिए । खासमा त्यो उहाँको ठूलो मजाक थियो । बिपक्षले पनि उहाँको मजाकलाई खुट्टाउन सकेनन ।
त्यो मजाक भने कतिपयलाई भारी फसाद भयो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि पोखरामा केही मान्छेहरु भोकै भएको खबर आयो । कारण यो थियो कि सरकारले खाना ल्याइदिन्छ भनेर कामै नगरी बसे । पछि उनिहरुले पनि प्रधानमन्त्रीले मजाक गरेको सुइँको पाए ।
प्रधानमन्त्रीको संगतले उहाँको ठट्यौली पारा सरुवा रोग जस्तै धेरैमा सरेको पाइयो । केही समय अगाडी कसैले जागिर नपाए नेपाल सरकारको कार्यालयमा उजुरी गर्नु भनेर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको संगतमा परेका अर्का दाहाल थरिका ठुलै व्यक्ति जो नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष जो थिए, उनले पनि ठुलै मजाक गरे । बेरोजगारी भएर बिदेश पसेका ४० लाख युवाहरु मध्ये केही थान युवाहरुले उहाँको मजाक खुट्याउन नसकेकाले नेपाल फिर्ता भएर बेरोजगारी भएको बेहोरा सहितको निबेदन पेश गर्न खोजेका थिए ।
देशै मजाकमा चलिरहेको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नेपालको पानी अरवमा बेच्ने मजाक गरे । अहिले कतिपयले नेपालको करोडौंको बिजुली भारत र बङ्गलादेश बेच्ने सम्झौता गरेर मजाक गरे । बिजुली निकाल्नु अघि नै गरेको सम्झौता पनि सानो मजाक होइन ?
मजाककै रोलक्रममा आए साइकल मन्त्री लालवाबु पण्डित । पहिले जनतालाई आफू साइकल मन्त्री भएको कुरा सुनाए । अहिले उहाँले गजवको ठट्टा गर्नु भएको रहेछ भनेर प्रमाणित गरे ।
पण्डितको साथमा लाखौं मुल्यको मोटर रहेछ । त्यो पनि सानो मजाक होइन । साइकल मन्त्रीको सुरक्षाको लागि दर्जन बढी सुरक्षा गार्ड पनि साइकलमै यात्रा गर्दा हुन् भनेर सोच्दा मात्रै पनि हासो लाग्छ । पत्याउने जनता पनि बेकुफ हौं ।
मजाकको सिलसिला यतिकैमा रोकिदैन । जहाजको वाइड बडी किन्दा सरकारले ठुलो क्षमता भएको प्लेनको मुल्य मजाक मजाकमै तिरेछ । तर उतावाट पनि मजाकको जवाफमा जहाज आउँदा कम क्षमताको जहाज आयो । जहाजमा मात्रै होइन, विद्युतीय बस किन्दा पनि ठुलै मजाक भएछ । चाईनिज बस भनेर किन्यो तर ल्याउँदा ईन्डियन आएछ । यो त दिउँसै रात पार्न सक्ने खालको मजाक थियो । जो अहिले बन्द भैसक्यो भन्ने हल्ला पनि छ ।
मजाक गर्न पनि अबस्था हेरि गर्नुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीको सिको गरेका मन्त्री र सचिवहरु ठाउँका ठाउँमै ठहरै मजाक गर्दा नेपाल राज्य नै मजाक बनेको छ । ठूलो बेइज्जत ब्यहोर्नु परेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले इन्डोनेशियालाई समबेदना पत्र पठाउदा ठट्यौली पाराले बधाई पत्र पठाएर अन्तरास्ट्रिय स्तरकै ठूलो मजाक गरे । सर्वत्र बिरोध भएपछि एकजना ठुलै मान्छेले कार्वाही गर्छु भन्यो । सचिवले ठट्टा गरेकाले ठुला मान्छेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय ठट्टा गर्न छुट छ भनेर बुझिदिए हुन्छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक शब्दमा मजाक गर्न मिल्ने तर सचिवले ठट्टा गर्न नमिल्ने भनेर बिधानमा लेखिएको छ भने बेग्लै कुरा हो । होइन भने कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ ।
१८ पुष २०७५, बुधबार को दिन प्रकाशित